Maninona ny lohahevitra WordPresso manaraka no tokony handray andraikitra | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 23, 2013 Alatsinainy, Septambra 23, 2013 Douglas Karr
As manaiky Design mitombo laza, hitako ny fampiharana tsy mampino an'ny mamaly vita tsara. Ary miaraka amin'ireo mpanjifa tsy misy tranonkala finday manokana dia mahita fanatsarana miavaka izahay fahitana ny motera fikarohana ihany koa.
Ny lohahevitra WordPress dia nandray ny paikady ary misy ohatra tsy mampino any (ny fahafahana misafidy tranonkala dia iray amin'izany). Na dia sarotra aza ny endrika sy ny takelaka, ny tombony lehibe dia ny tsy fihazonana endrika sy fahatsapana manokana amin'ny faritra maro, na amin'ny alàlan'ny plugin. Manantena izahay fa hahomby amin'ny farany Martech Zone mamaly indray andro any!
Ireto misy tombony vitsivitsy amin'ny fividianana lohahevitra Responsive ho an'ny fampiharana WordPress manaraka anao avy amin'ireo olona ao Lohahevitra mamaly WP:
Tags: lohahevitra mamalyWordPresslohahevitra mamaly ny wordpresslohahevitra wordpress